Maxamed Yaasin oo ku dhawaaqay musharaxnimada Madaxweynaha (Sawiro) – SBC
Maxamed Yaasin oo ku dhawaaqay musharaxnimada Madaxweynaha (Sawiro)
Maxamed Yaasin Ismaaciil oo ka mid ah ganacsatada waa weyn ee Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland ayaa magaalada Nairobi kaga dhawaaqay qorshihiisa u tartanka jagada madaxweynaha Soomaaliya, isagoo sidoo kale daaha ka rogay xisbi siyaasi ah oo uu madax yahay.
Xisbiga cusub ee uu ku dhawaaqay Xaaji Maxamed Yaasin ayaa lagu magacabaa Xisbiga, Cadaalada, Nabadda & Horumarka ama JPP (Justice, Peace and Progress).
Xaaji Maxamed Yaasin
Kulan balaaran oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin, ganacsatado, aqoonyaho, xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya, Issimo & qaybaha ururkada bulshada oo lagu qabtey Hotel-ka Grand Regency Hotel ee magaalada Nairobi ayuu kaga dhawaaaqay Xaaji Maxamed Yaasin qorshishiisa musharaxnimada.
Ka bilow bidix(Prof. Dalxa, Cawad Cashro)
Siyaasiyiintii kulankaasi ka soo qayb gashey waxaa ka mid ahaa, Prof. Ismaaciil Maxamuud Hure (Buubaa) Prof. Saalim Caliyow Ibrow, Xildhibaanada Caasha Axmed Cabdalla, General Maxamed Siciid Moorgan,Xildhibaan Cawad Axmed Cashara, Xildhibaan Qanyare Maxamed Afrax, Prof. Maxamed Cumar Dalxa, Maxamed Warsame Kiimiko Madaxwenihii hore ee maamulka Galmudug, xildhibaan Mowliid Macaame Maxamed, Siyaasi Cali Daacuun,Gen Cade Muuse Xirsi Madaxwaynihii Hore ee Puntland,Xildhibaan Kula Lihi,Siyaasi Cali Cadaawe & xubno kale oo fara badan.
Xafladan oo aheyd mid si weyn looga soo shaqeeyey ayaa waxaa hadalo kala duwan ka jeediyey dadkii lagu marti qaaday.
Prof. Ismaaciil Buubaa
Prof. Ismaaciil Maxamuud Hure (Buubaaa) oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed isla markaana jagooyin kala duwan ka soo qabtey dawlado kala duwan oo dalka soo marey ayaa hadal uu ka jeediyey xafladaasi wuxuu ugu horeyn ku soo hadal qaaday aqoonta uu u Leeyahay Musharax Maxamed Yaasiin.
“Xaalada Soomaaliya maanta ay mareyso waa marxalad aad u adag, qofkii ka saari lahaa marxaladaasina waxaa looga fadhiyaa in uu ka soo baxo ummada Soomaaliyeed, marka aniga waxay ila tahay in Xaaji Maxamed Yaasin uu iila muuqdo nin ka bixi kara xaalada murugsan ee Soomaaliya, kana saari kara” ayuu yiri Prpof. Buubaa.
Maxamed Xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya oo isna cod baahiyaha lagu soo dhaweeyey ayaa wuxuu xusey in Soomaaliya u baahan tahay qof muwaadin ah oo ka badbaadiya marxaladan adage e Soomaaliya ku sugan tahay, isagoo sheegay in ummada Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan tahay meel kasta oo ka mid ah dunida dacaladeeda.
Wuxuu sheegay in Xaaji Maxamed Yaasin uu yahay nin wax weyn ka badali kara marxalada wadanku ku sugan yahay, isagoo sheegay in uu u rajeynayo in uu ku guuleysto xilka uu u tartamayo.
Caasha Axmed Cabdalla
Xildhibaan Caasha Axmed Cabdalla oo ka mid ah Baarlamanka Soomaaliya oo hadal ka jeedisey xafladaasi ayaa ugu horeyn waxay sheegtey in ay si weyn ugu faraxsan tahay una soo dhaweynayso musharaxnimada Maxamed Yaasin, iyadoo si gaar ah ugu baaqdey in hadii uu ku guuleysto jagada Madaxweynaha uu saamigooda xaqa ay u leeyihiin uu siiyo haweenka Soomaaliyeed.
Caasha mar ay ka hadleysay arimaha xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya waxay ka hadashay magacyo loo bixiyey xildhibaanada waxaana ay tiri “Aad baan uga Xumahay in Baarlamaanka qaarkiis magacyo kala gadisn loo bixiyo isla markaana la ihaaneeyo anaga wax yar baanu musharax u xaadirnaa inta kale dalka Soomaaliya baanu u shaqayn, waad ogtihiin shirkado shisheeye ayaa Muqdisho buux dhaafiyay kuwii la xisaabtami lahaa waa siyaasiyiinta Somaliyeed”
Xildhibaan Mowliid Macaani oo ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliyeed ayaa isaguna sidoo kale soo dhaweeyey musharaxnimada Maxamed Yaasin, isagoo sheegay in ay aad u taageerayaan in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, isla markaana uu aaminsan yahay in uu yahay shakhsi ku haboon in uu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan Prof Saalim Caliyow Ibrow ayaa Mukirifoonka lagu soo dhaweeyay isaga oo docdiisa isna sheegay inuu soo dhawaynayo musharaxa Somaliyeed ee u taagan Hogaanka Soomaaliya isla markaana wixii Tabartooda ah ka Xildhibaan ahaan ay ku Taageerayaan.
Mowliid Sheekh oo ka mid ahaa Odayaasha Soomaaliyeed ee degan magaalada Nairobi ayaa isna hadal ka jeediyey goobtaasi ayaa cadeeyey inay garab taaganyihiin Xaaji Maxamed Yaasiin oo Qeexay inuu quudaraynayo Hogaanka Madaxtinimo ee Soomaaliya.
Maxamed Warsame Kiimiko oo ahaa Madaxwaynihii Hore ee Maamulka Gal Mudug ayaa isna ka hadlay goobta isaga oo qeexay in Siyaasada Somaliya ay Meel Kaliya iska qabsan la’dahay taasina ay tahay buu yiri fara galinta wadamada shisheeye kuwaasi oo aan daacad ka ahayn arimaha fara galinta Soomaaliya waxa uu ugu baaqay musharax inuu aad uga fiirsado in fara galin dibada uga timaado Soomaaliya.
Ugu dambeyntii waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey musharax Xaaji Maxamed Yaasin oo ah Gudoomiyaha xisbiga JPP wuxuu ugu horeyn u mahadcliyey dadkii xaflada ka soo qayb galey, isgaoo uga mahadceliyey sida ay u soo ajiibeen ka soo qayb galka xafladan.
“Maanta halkan waxa ka cadaynayaa inaan ahay musharax u taagan madaxtinimada Soomaaliya, hadii aan ku guuleysto jagada madaxweynaha waxaan xooga saaraya arimaha amaanka soo celinta qarankii Soomaaliyeed, soo celinta hantidii Soomaaliyeed, sidoo kale waxaan aad uga shaqaynayaa shaqo abuurida dadka Soomaaliyeed anaga oo dalka Maal gashi balaaran uga keenaya wadamo badan oo aan xiriir wanaagsan la leeyahay” ayuu yiri Musharax Maxamed Yaasin.
Musharaxa ayaa sii hadley waxaana uu yiri “ Mudo 32 sano ah ayaan ahaa ganacsade, intaasi oo dhan marna siyaasada lugta ma soo gelin, haatan waxay iila muuqataa inaan wax weyn ka qaban doono arimo badan, sida amaanka & dhaqaalaha, waxaan u ahaa hanta dhawr dawlidii dhexe ee Soomaaliya, waxaan taasi muujinaysaa sida aan u ahay qof maareyn kara dhaqaalaha”.
General Cade Muuse
Xaaji Maxamed Yaasin wuxuu ugu dambeyntii muujiyey in hadii uu ku guuleysto jagada madaxweynaha Soomaaliya uu isbadal balaaran ku sameyn doono arimaha bulshada, dhaqaalaha, amaanka iyo siyaasada Soomaaliya, waxaana uu ka codsadey xildhibaanada Soomaaliyeed & shacabka Soomaaliyeed inay codkooda siiyaan oo ay ku aaminanaan xilkaasi culus isagoo cadeeyey in uu ku shaqeyn doono cadaalad & sinaan.
Ma ahan markii ugu horeysay ee uu Maxamed Yaasin isu soo taago tartanka doorashoorashooyinka madaxweynenimo ee Soomaaliya, sanadkii 2004-tii wuxuu ka mid ahaa daraasiin siyaasiyiin ah oo isu soo taagey doorashadii madaxweynimo ee lagu qabtey wadanka Kenya ee uu ku guuleystey Cabdulaahi Yuusuf Axmed madaxweynaha dawladihii KMG ah ee aheyd.
Sawir Qaade: Jaamac Ayaanle Faye